Acunetix को साथ खाडीमा वेबसाइट ह्याकि Keep राख्दै: सबै साइट मालिकहरूको लागि Semalt बाट उपयोगी सुझावहरू
साइबर क्राइम र अझ विशिष्ट कुरा, ह्याकि ha बढ्दै गइरहेको छ। ह्याकरहरू आफ्नो बिरामी खेलमा चलाख र अधिक परिष्कृत हुँदैछन्। रिपोर्टहरू देखा पर्दै कि तिनीहरू व्यक्तिगत रूपमा नभई करीव बनिरहेको ह्याकिit समुदायको रूपमा काम गर्छन्। यहाँ उनीहरू पोष्ट र नयाँ वेब अनुप्रयोग घुसपैठ प्रणाली साझा गर्न को लागी तपाईलाई निदाएको रातहरू प्रदान गर्नु हो। यी वेबसाइटहरु र फोरमहरु को सदस्यता एक चयन केहि को लागी विशिष्ट छ।
प्रत्येक दिन तपाईले नयाँ ह्याकि attack एट्याकको बारेमा पढ्नुभयो जुन सम्मानित वेबसाइटका पृष्ठहरू मालवेयरबाट संक्रमित छन्। यी आक्रमणहरूले वेबसाइटलाई सुरुवात साइटमा बदल्छन्। जो कोही पनि ह्याक गरिएको वेबसाइटको भ्रमण गर्छन् उनीहरूको पीसी घुसपैठ हुने उच्च जोखिममा छ।
किन साइबर अपराध बढेको छ? ठीक छ, उत्तर सीधा छ; ई-व्यापार संचालनका लागि वेब आधारित टेक्नोलोजीको अपनाई ह्याकरहरूको लागि उत्तम प्रजनन मैदान सिर्जना गरेको छ। जहाँ यी अनुप्रयोगहरूले व्यापारलाई ग्राहक र आपूर्तिकर्ताको साथ निर्बाध जडान गर्न अनुमति दिन्छ, पहिले धेरै अज्ञात सुरक्षा खतराहरू देखा पर्‍यो।
तपाईको वेबसाइट किन ह्याकरहरूले लक्षित गरेको कारण धेरै हुन सक्छ। Igor Gamanenko, Semalt डिजिटल सेवाहरु का ग्राहक सफलता प्रबन्धक, केहि मा हेर्न को लागी आफैलाई रक्षा गर्न को लागी एक आंकडा प्रस्ताव गर्दछ।
संवेदनशील डेटा को निकासी को लागी ह्याकिking
कुनै पनि अनलाईन अपरेटिंग अपरेसन केहि शपिंग कार्ट, लगइन पृष्ठहरू, सबमिशन फारमहरू, डायनामिक सामग्री प्लस अन्य bespoke वेब अनुप्रयोगहरू सम्मिलित केहि वेब अनुप्रयोगहरू पाउँदछ। यी वेब अनुप्रयोगहरू डाटाबेसमा भण्डार गरिएको गोप्य डाटा सिर्जना गर्न, सबमिट गर्न र पुनःप्राप्ति गर्न आगन्तुकहरूलाई मद्दत गर्न डिजाइन गरिएको छ।
तपाईंको व्यापार २ 24/7 संचालित भएकोले विश्वको कुनै पनि ठाउँबाट कोही पनि यसमार्फत सर्फ गर्न सक्दछन्। दुर्भाग्यवस, कुनै पनि असुरक्षित वेब अनुप्रयोगले ह्याकरहरूको लागि खुला ढोका प्रदान गर्दछ। यदि तिनीहरूले तपाईंको डाटाबेसमा पहुँच प्राप्त गर्छन् भने, तब तपाईं ठूलो समस्यामा पर्नुहुनेछ। तपाईंको ग्राहकहरूको व्यक्तिगत र क्रेडिट कार्ड विवरणहरू बेच्न वा बाँकी विश्वको सम्पर्कमा आउन सक्दछ। सयौं कम्पनीहरूले यो संवेदनशील जानकारीको एक्सपोजर वा चोरीको बारेमा कानुनी लडाई गुमाएका छन्। अरूले पसल बन्द गरेका छन्। सबैले सरोकारवाला र ग्राहकहरूको विश्वास गुमाए।
फिसिंग योजना लागू गर्न ह्याकिac
यो मान्नुहोस् कि तपाईको डेटाबेस अफलाइन र सुरक्षित भएकोले तपाई ह्याकि fromबाट सुरक्षित हुनुहुन्छ। तपाईंको वेबसाईट ह्याक गर्न सकिन्छ प्रयोगकर्ताहरूलाई 'हानिरहित' लिंक भ्रमण गर्नमा मूर्ख बनाउन जुन तपाईंको वेब पृष्ठहरूबाट पुनःनिर्देशित छन्। यो उनीहरूले कसरी गर्ने भन्ने हो: तीनिहरूले तपाइँको वेब अनुप्रयोगहरूमा कोड इन्जेक्ट गर्छन् जसले गर्दा प्रयोगकर्ता फिशिंग साइटमा पुन: निर्देशित हुन्छ, जुन कि उनीहरूको बैंक खाता विवरणहरू पुनःप्राप्ति गर्न प्रयोग गरिन्छ। कुनै पनि वेबसाइट फिशिंग भएको फेला पर्‍यो (यदि तपाईं केवल एक शिकार हुनुहुन्छ भने पनि) मुद्दाको लागि जिम्मेवार छ। महँगो।
ब्यान्डविथ मा दुरुपयोग गर्न ह्याकिking
ब्यान्डविथ एक महँगो वस्तु हुन सक्छ। केहि चीज जुन एक ह्याकरले अवैध व्यापार गर्न को लागी प्रयोग गर्न मनपराउँदछ जस्तै पाइरेटेड सामग्री साझा गर्न। जब संघीय अधिकारीहरू ठट्टामा आउँछन्, यो तपाईं हुनुहुन्छ जससँग केहि व्याख्या गर्न को लागी हुनेछ।
जस्तो स्पष्ट छ, तपाईंको वेबसाइट कुनै पनि कारणको लागि ह्याक गर्न सकिन्छ। यो विश्वास गर्नुहोस्, वा केही हैकरहरूले केवल SEO उद्देश्यका लागि तपाईंको वेबसाइटमा घुसाउँछन्? Queer, सही?
Acunetix तपाइँको रक्षा गर्नेछ
एक्नुटेक्स प्रयोग गरेर आफैलाई ह्याकरबाट सुरक्षित गर्नुहोस्। जटिल एसक्यूएल ईन्जेक्सन र क्रस साइट स्क्रिप्टि attacks आक्रमणहरू जुन संयुक्त राष्ट्र स website्घको वेबसाइटमा जारी गरिएको थियो, संयुक्त राज्यको होमल्याण्ड सुरक्षा विभाग, याहू र युनाइटेड किंगडमको सिभिल सेवालाई एक्युनिक्स प्रयोग गरेर रोक्न सकिन्थ्यो। आज यसलाई प्रयास गर्नुहोस्। तपाईं सुरक्षित हुनुहुनेछ।